Iindaba - Ukungcangcazela kwemoto engena manzi
Yonke inkqubo yovavanyo yemoto engcangcazelayo kukujonga kunye nokulinganisa izixhobo. Izinto zokubalula ezahlukeneyo zahlulwe zangaphezulu kunye nezinto ezisezantsi. Ukuvavanywa kokusebenza kufanele ukuba kube phezulu, amandla okuqhubekeka kwesihlobo kufuneka ahlangabezane neemfuno, kwaye izinto zinokuhanjiswa. Kukho izizathu ezahlukeneyo zokuvavanywa kwezixhobo ngokushukuma kwescreen, ukuze izinto ezincinci kune-mesh zingadluli kumngxunya wesisefo sekrini eshukumayo kakuhle. Inxalenye encinci kuphela yezinto ezintle ezinokukhutshwa kumngxunya wesisefo, ngelixa ezinye izinto ezincinci kunembobo yesisefu zixutywe nezinto ezinkulu kunembobo wesisefo (okt izinto ezikwisikrini).
Kwisixhobo sokujonga ukungcangcazela kwemoto, indawo yovavanyo esebenzayo, ubume bescreen, ukungcangcazela kwescreen sesibuko, ukungcangcazela kwefrikhwensi kunye nokuphakama kwayo zezona zinto ziphambili ezichaphazela ukusebenza kwescreen sokungcangcazela; ngenxa yobungakanani bezinto, ukufuma (umxholo womswakama), ukuhanjiswa kwezinto eziyimbudumbudu kunye nokufuma kwezinto eziphathekayo, ikwasona sizathu siphambili esichaphazela ngokuthe ngqo inqanaba lokujonga kwescreen sokungcangcazela. Izinto ezinokubakho ukulunga okufanelekileyo, umxholo wamanzi amancinci, imilo yamasuntswana rhoqo, umphetho ogudileyo kwaye akukho macala kunye neekona kulula ukudlula kwiscreen.
Ukuze kuphuculwe ukusebenza kwescreen semoto eshukumayo, kwezi zinto zintle kunye nezixhobo ekunzima ukuzikrola, isetyhula eshukuma isikrini inokulungisa indlela ejikelezayo ye-vibrator (buyisela umjikelo wokujikeleza kwezinto) ukwandisa ixesha lokudibana phakathi umphezulu wescreen kunye nezinto eziphathekayo, ezifanelekileyo kwinqanaba lokuhlola, kodwa amandla okuqhubekeka aya kuncitshiswa; Iscreen sokungcangcazela komgama sinokunciphisa ngokufanelekileyo i-angle yokuthambeka esezantsi yomphezulu wescreen oshukumisayo okanye inyuse i-angle ye-Vibration ejijayo isetyenziselwa ukuthoba isantya sokusebenza kwezinto kunye nokuphucula inqanaba lokujonga; ngezinto ezilula ukuvavanywa kunye namasuntswana amakhulu, i-engile esezantsi yokujonga umphezulu wescreen sokungcangcazela inokunyuswa okanye i-angle yokuthambekela kwe-vibration inokuncitshiswa ukukhawulezisa ukuhamba kwezinto, ukuphucula ukusebenza umthamo. Ukuba ukukhutshwa kwescreen sokungcangcazela komgama kuyafuneka ukuba kubengaphezulu, kwaye ukusebenza kovavanyo kunye namandla okuphatha kufuneka kuhlangatyezwane nawo, ububanzi kunye nobude bomphezulu wescreen sokungcangcazela unokunyuswa.